खुसिको खबर ! यी हुन् नेपाली महिला फुटबल टिमको नयाँ प्रसिक्षक | TajaKhabarTV
खुसिको खबर ! यी हुन् नेपाली महिला फुटबल टिमको नयाँ प्रसिक्षक
२०७७, १४ फाल्गुन शुक्रबार १३:०० February 26, 2021 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्सलाई नियुक्त गरेको छ । एन्फाको टेक्निकल कमिटिले बिहीबार फिलिप्सलाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो ।
महिलाको एएफसी एसियन कप छनोट र साफ च्याम्पियनसिपसम्मको लागि एन्फाले फिलिप्सलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि फिलिप्स प्राविधिक निर्देशनको रूपमा काम गरिरहेका थिए ।
गत वर्ष नेपालमै आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पछि महिला टोली प्रशिक्षक विहीन छ । सागको फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पोखरामा भएको फाइलन खेलपछि महिला टोलीले हालसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छैन । अष्ट्रेलियन ग्यारी गत वर्षको कार्तिकबाट एन्फामा प्राविधिक निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । कोरोना महामारीका बीच घर फर्किएका उनी नयाँ सम्झौता लगत्तै गत महिना नेपाल आएका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघले सञ्चालन गर्ने काठमाडौं मेयर कप, २०७७ फागुन २२ देखि हुने भएको छ । प्रतियोगिता कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा फागुन २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्रतियोगितामा ५ टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् । माघमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप पुरुष एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका चारवटा सेमिफाइनलिस्ट टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ, नेपाल पुलिस क्लब र बाग्मती प्रदेश सँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको टिम पनि सहभागी हुनेछ ।
महानगरको टोली प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडी समावेश गरेर तयार हुनेछ । टोलीहरूले सिंगल राउन्ड रोबिनमा खेलेपछि शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन् ।
२०७८, ८ बैशाख बुधबार १३:१६
मेस्सी र रोनाल्डोले विश्वकप खेल्न नपाउने ! यस्तो छ कारण
२०७८, ७ बैशाख मंगलवार २०:०२
बधाई ! जलपरी गौरिका सिंह ‘एशियाकै ३० सर्वाधिक प्रभावशाली युवा’ को सूचीमा